Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo(Last Updated On: 29/12/2019)
Kuwani Talooyin Top for Tegay xayawaankaaga guriga waa in uu kaa caawiyo yareynta walaacaaga. Maxaa yeelay, aynu u wajihi, Tegay xayawaankaaga guriga waa walaaca! Laakiin waxa ay ka caadadis, waa siday maleeyeen inuu ka tago xayawaanka aad guriga ama daryeelka dadka kale. Waxa cad in mid ka mid ma u muuqataa iyaga ka dib sida aad u samayn! Right?
Waxaa jira fursado badan oo waxa la sameeyo marka aad guriga ka maqan safarka. hotels Dog, shaqaaleyn xilgaarsiin ah ama wareejinta culaabtii, inkastoo mid ka mid ah cute, si aad saaxiib ka mid ah doorashooyinka ay yihiin. Kuwani waa kuwa ugu badan in dadka door biday in ay. Si kastaba ha ahaatee, mararka qaarkood ma jiraan wax ikhtiyaar kale oo aad leedahay si aad u safri xayawaanka. Inkasta oo ay noqon karaan kuwo hab adag, Save A tareenka ayaa qaar ka mid ah talooyin top kaa caawin doonaa inta aad Tegay xayawaanka!
Safrin meel qasac cusub oo noqon doona culays xayawaankaaga. Sidaas in la hubiyo in uu weli sidii dabacsan sida ugu macquulsan fure u tahay safar raaxo u leh qof kasta ku lug. Soo qaado alaabta lagu ciyaaro si joogto ah isaga ama iyada, bustayaal iyo agabka kale oo ka dhigo mid aad eey ama bisad raaxo. waxay ahaayeen kuwo is dajiyaan oo aan wax qalad ah samayn? Hubi in aad ka abaalmarinaynaa si ay u sameeyaan Tegay xayawaanka raaxo badan mustaqbalka.
Haddii aad jeceshahay ama ma, kuwaas oo Talooyin Top for Tegay xayawaankaaga guriga ka dhigan tahay inaad tahay qeybiso ayaa in la sameeyo nooc ka mid ah jimicsi! Ka hor inta aadan bilaabin safarka, u qaadan, waayo, qaar ka mid ah jimicsi xooggan! Sababta oo ah socod dheer oo dheeraad ah ama kenaan u daran oo aad saaxiib qalafsaneyn la jecel yahay, isaga ama iyada waxaa laga yaabaa in kaliya aad u daalan walwalo waxyaalaha. haddii aad heshay bisad in sidaas ma aha jeclaan of loo qabsan ordaa, isku dayaan in ay gudaha iyaga kicin. alaabta lagu ciyaaro Samee-wareeg iman kartaa foomamka of masaxo ciidda tusaale ahaan! i aamini… Waxaan leeyahay waayo-aragnimo in Tegay xayawaanka!
dalal kala duwan waxay leeyihiin shuruudo kala duwan. Waddamo badan oo u baahan waqti karantiil, sidaa darteed haddii aad rabto in aad waqti Tegay xayawaankaaga, hubi in aad double-hubi this! Inta badan wadamada waxay u baahan yihiin in tallaaladaas raabiyada, bordetella (qufac guri eey), iyo parvo. Wac safaarad iyo sameeyo cilmi-online si aad u aragto waxa looga baahan yahay dalka yihiin, iyo in la hubiyo in aad waraaqaha ku anfacaya marka gudbayay xadka.
Aad baadhitaan karaa oo ku saabsan Tegay xayawaanka iyo shuruudaha dalka at PetTravel.com.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “Talooyin Top Waayo, Iyadoo Your Xayawaanka Socdaalka” gal your site? sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-traveling-with-your-pets%2F- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)